Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ukonwatyiswa » Iisekisi eMantla eIreland ziphelelwe ziimeko zokuhlekisa
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ukonwatyiswa • umculo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Ayinguye wonke umntu othanda ukuhlekwa kodwa umntu ongumboni, eyona nto imbi kakhulu kuwe kukungakuhlekiswa.
Uqhekeko olunqongopheleyo lwasemva kwe-COVID-19 yokunqongophala kwamashishini osekethe wase-Ireland.
Ukufuna ii-clown kuyakufuneka zenze ngaphezulu kokuzikroboza ekwenzeni kunye nokubamba iipie zokugcwalisa izihlangu ezingaphezulu kobugcisa babo.
Ukuba ngumhlekisi kuya kufuneka ukwazi ukuzonwabisa ngokwakho-ayisiyiyo eyokuhlekisa ngabanye abantu.
Iisekisi kungekudala ziya kukhenketha eMantla eIreland kwakhona Iikhonkco ze-COVID-19 Bakhululekile, kodwa ngokweengxelo zeendaba zase-Bhritane, bajongene nokunqongophala kwamahlaya, abaphathi beeseksi befuna ngamandla ukufumana abadlali abatsha.
Okwangoku, lonke ihlabathi liyazi UKIngxaki yamafutha eqhubekayo, kodwa bambalwa kakhulu abantu abayiqondayo into yokuba kukho ukunqongophala okukhulu kwe-clown enorthern IrelandIisetyhula.
Uninzi lwaba badlali lubuyele kumazwe abo ekuqaleni kobhubhane we-COVID-19 kunyaka ophelileyo, okanye sele beye phesheya beyokufuna umsebenzi kumazwe esele evuliwe.
Ngenkqubo yokundwendwela ye-non-EU clowns eyinkimbinkimbi, abanini beesekisi bazama ukufikelela kubo nabaphi na abantu ekhaya abavakalelwa kukuba bangayinika.
Ukufuna ii-clown kuyakufuneka zenze ngaphezulu kokuzikroboza ekwenzeni kunye nokubamba iipie zokugcwalisa izihlangu ezingaphezulu kobugcisa babo. Ngokomnye umnini wesekisi, xa ungena kwiringi yesekisi kwaye unabantu abangama-700 ukuya kuma-800 abakujongayo, kungakhathaliseki ukuba uluphi uhlobo lomoya okhoyo kufuneka ukhanyise loo ringi yesekisi. Kuya kufuneka ukwazi ukufunda abaphulaphuli bakho, kwimizuzu embalwa emifutshane kuya kufuneka ubenakho ukufumana ubudlelwane kunye nabo kwaye unxibelelane kwaye ubondle.
Ngelixa iziqhulo zibhala ngokwazo, ishishini lokuhlekisa asiyonto yokuhlekisa, iingcali zeshishini zithi: “Asinguye wonke umntu othanda ukuhlekwa kodwa umntu ongumboni, eyona nto imbi kakhulu kuwe kukungakuhlekiswa. "
"Kufuneka ube nakho ukuzihlekisa, ayikokuhlekisa ngabanye abantu."
Iihotele: Ingeniso yokuhamba ishishini isezantsi kwi-59 yezigidigidi kwi ...
Iipesenti ezingama-42 zabantu baseBritane banokucinga ngokuya kwiholide eSaudi...
UKumkanikazi wathatha indawo kaMongameli wokuqala omtsha
Imbali yeManchester United kunye neMaltas ...
Ukufika okuyonwabileyo eSeychelles: Ukungcamla kweParadesi!
Uhambo olutsha lwaseCuba: Akukho kuvalwa, akukho mvavanyo
Ukujonga ngasemva kwemiboniso emangalisayo ye-IMEX eZinzileyo...
Indawo yokufikela iMekong iqabane elitsha lokusungulwa kweGlasgow...
Ukuqhomfa okuZilawulayo ngokuSebenzisa ngokuSetyenzwa ngokuKhuselekileyo
Ukuhlaliswa kwe-BOEING 737 MAX: iBoeing ivelisa into engakhuselekanga ...
Ukhenketho olutsha lwaseTurkey luGxila kwimitshato